कालाजारबाट एकको मृत्यु
आश्विन ७, २०७६ ०२:२५:२७
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कालाजारका बिरामीको मृत्यु भएको छ । पश्चिम तराईमा उन्मुलन भइसकेको भनिएको कालाचार चार वर्षपछि भेटिएको हो।
पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका बल्ढेङगढीकी जीवन रानाको मृत्यु भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेट डा. कृष्ण खनालले जानकारी दिए । भैरहवास्थित मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा कालाजार भएको पत्ता लागेपछि उनलाई थप उपचारको लागि प्रादेशिक अस्पताल बुटवल ल्याइएको थियो ।
कालाजारको यो क्षेत्रमा प्रादेशिक अस्पतालमा बाहेक अन्यत्र उपचार हुँदैन। भुसुनाको टोकाइबाट कालाजार हुने गर्दछ । कुनैबेला यो रोग तराई क्षेत्रमा मात्रै बसोबास गर्नेलाई हुने गर्दथ्यो । तर अहिले उच्च हिमाली क्षेत्र र पहाडमा समेत देखिन थालेको छ।
यो रोग लागेमा सामन्यता लगातार ज्वरो आउने गर्छ भने फीयो र कलेजोमा संक्रमण बढ्न गई पेट फुल्लिने, कमजोरी महसुस हुनेलगायत लक्षण देखिने डा. खनालले बताए । चिकित्सकका अनुसार यो रोग लागेमा रक्तअल्पत्ता हुने, मानिस दुब्लाउदै जाने, फियो धेरै बढ्ने तथा केही समयपछि कलेजो समेत बढ्ने हुन्छ ।
कालाजार 'लेसमानिया डोनोभानी' नामक प्यारासाइट प्रोटोजोवाका कारण हुने रोग हो । यो एक प्रकारको सेन्टलाई नामक भुसुनाको टोकाइबाट सर्छ । रोगी व्यक्तिलाई टोकेको भुसुनाले निरोगी व्यक्तिलाई टोकेमा यो रोग सर्छ । त्यसैले यसलाई सरुवा रोग पनि भनिन्छ । कुकुर, सुँगुर, हाँस, बंगुर र जंगली मुसाहरूमा यो रोग बढी पाइन्छ । कालाजार जुनसुकै उमेरको व्यक्तिलाई हुन सक्छ।
प्रकाशित मिति: मगलवार, भदौ २४, २०७६, ०१:०९:००